पैसा छैन भन्दै रोग नपाल्नुस् है ! राजधानीको एउटा अस्पतालमा एक सय रुपैयाँमै उपचार हुन्छ-जानकारीको लागी शेयर गर्न नभुल्नुहोला - नमस्ते खबर
तपाईलाई के रोग लागेको छ, काउन्टरमा भन्नुहोस् । काउन्टरमा बस्ने व्यक्तिले तपाईको रोग अनुसारको डाक्टरको नाम सिफारिस गर्छन् र तपाईको हातमा एउटा पूर्जा थमाउँछन् ।अब तपाईले विशेषज्ञ डाक्टरलाई देखाउन पैसा तिर्नुपर्छ ।कति थाहा छ ?
कस्तो पत्याउनै गाहे लाग्ने कुरा ।हो, राजधानीको एउटा अस्पतालमा एक सय रुपैयाँमा नै रोगको उपचार हुन्छ ।अस्पतालमा जनरल फिजिसियन, बाल, नशा तथा हाडजोर्नी, स्त्री, मुट, छाला तथा यौन, रोगका पच्चिस जना विशेषज्ञ डाक्टर उपलव्ध छन् ।
बिरामीले प्याथोलोजी सेवा लिनु परे या ईसीजी वा अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपरे थप शुल्क तिर्नु पर्दैन । अझ रमाईलो कुरा त, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र भएका बिरामीलाई त अस्पतालले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । अपांग तथा महिलाको लागि पनि अबस्था हेरेर अस्पतालले शुल्कमा छुट दिदै आएको छ ।न्युन आय भएका व्यक्तिहरु धेरै पैसा लाग्ने भयले अस्पताल जान डराउँछन् । र शरिरमा रोग पालेर बस्ने गर्छन् ।
बिरामीलाई यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गर्न अस्पताल खोलिएको अस्पतालका संस्थापक उत्तम संजेल बताउँछन् ।अस्पताल गएको असार २३ गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालले ओपीडी सेवा मात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ । र, पनि दैनिक करिब २७ सय जना बिरामीले अस्पतालबाट सेवा लिईरहेका छन् ।हाँस्य कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य यस अस्पतालका संरक्षक हुन् ।र, यो कथा समता अस्पतालको हो ।